Warar - nus dayax albaabka Jooji cinjir
Sida loo ilaaliyo joogsiga albaabka? Door Stop, oo sidoo kale loo yaqaan taabashada albaabka, sidoo kale waa albaab ka dib marka la furo qalabka meelaynta nuugista, si looga hortago dabaysha inay dhacdo ama taabato albaabka oo la xiro. Door Stop wuxuu u qaybsan yahay magnet joogto ah Door Stop iyo albaabka elektromagneticga Jooji laba nooc, nuugista albaabka magnetka joogtada ah guud ahaan waxaa loo isticmaalaa albaabada caadiga ah, gacanta ayaa kaliya lagu xakamayn karaa; Albaabka elektromagnetic-ka waxaa loo adeegsadaa albaabbada dabka ka caaggan iyo Windows iyo qalabka kale ee koontaroolka elektiroonigga ah, gacanta gacanta iyo shaqooyinka kontoroolka otomaatigaba ah.
Sidee loo ilaaliyaa joogsiga albaabka Labada qodob ee soo socda ayaa u baahan in la xuso:
1, si looga hortago isku dhaca maaraynta.
2, markaad nadiifinaysid, iskuday inaadan qoyin qeybaha birta, marka hore isticmaal maro jilicsan ama dun suuf ah oo qalalan si aad uga saarto boodhka, ka dibna ku tirtir maro qallalan, ku hayso qalalan. Ha isticmaalin nadiifiyeyaal midab leh ama ha yeelin lakabka dusha sare.
Qaabka gaarka ah ee loogu rakibo irridda albaabka waxaa loo gudbin karaa tallaabooyinka soo socda:
Sida loo rakibo cagta Albaabka Joogso
Magnetka Caadiga ah ee Joogtada ah Jooji iyadoo la raacayo qaabka rakibaadda nooca derbiga lagu rakibay, nooca dhulka lagu rakibay, nooca caagga ah, nooca birta iyadoo la raacayo qalabka; Soojiidashada albaabka elektromagnetic iyadoo la raacayo habab kala duwan oo alaabada rakibaadda albaabka loo qaybiyay nooca gidaarka CT-01, CT-02 nooca dhulka, silsiladda CT-03 nooca saddexda qaybood, Darbiga korantada elektromagnetic-ka Jooji iyadoo loo eegayo qaab-dhismeedka kala duwan wuxuu u qaybsan yahay nooca caadiga ah, sare u qaad nooca, nooca dheereeyay, nooca sanduuqa, nooca madow, nooca gacanta dheer; Nooca dhulka ee nuugista elektromagnetic-ka wuxuu ka kooban yahay CT-01 nooc albaabka nuugista elektromagnetic-ga iyo xaglaha midig-xagalka sii kordhaya; Nooca silsiladda elektromagnetic Door Stop wuxuu ka kooban yahay CT-01 albaabka elektromagnetic Door Stop iyo silsiladda xira; Sababtoo ah nooca derbiga CT-01, nooca dhulka CT-02 iyo nooca silsiladda CT-03 nooca korantada elektromagnetic Door Stop waa mid ka dhexeeya midba midka kale, way ku habboon tahay dadka isticmaala inay doortaan iyadoo loo eegayo xaaladaha rakibidda goobta.
Waqtiga boostada: Juun-22-2021